Imidiya yokuncokola PR - iingozi kunye nemivuzo | Martech Zone
Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, ndafumanisa izibonelelo ze-on-line PR njengendlela yokwandisa ukubonwa kwabaxhasi bam. Ukongeza ekuthumeleni kumaziko eendaba amiselweyo, ndenze eyam indawo- I-Indy-Biz, njengendlela yokwabelana ngamabali eendaba ezimnandi malunga nabaxhasi, izihlobo kunye noluntu lwasekuhlaleni lwe-biz.
Ngaphezulu kweminyaka emibini le ndawo ibeyimpumelelo. Yonke into ibiyinto entle, kude kube izolo, xa umntu ongonwabanga ethumele ingxelo engathandekiyo. Amagqabantshintshi ayephendula kwibali malunga neshishini lasekuhlaleni, eliqhutywa ngumhlobo wam olungileyo.
Njengoko ndandijonga izimvo, ndandingaqinisekanga ukuba ndenzeni. Eyona nto bendifuna ukuyenza kukususa uluvo. Ungathini ukutsho lonto ngomhlobo wam? Kodwa ukucima amagqabantshintshi bekuya kwaphula ukuthembana endikwenzileyo nabafundi bam. Kwaye ukuba wayenomsindo ngokwenene, ngewayethumele la magqabantshintshi kwenye indawo kumnatha.
Endaweni yoko, mna uthumele impendulo, engavumelani noko wayekubhalile, kwaye wanika umhlobo wam “iintloko”. Ucele abanye abantu ekuhlaleni ukuba bathumele izimvo. Emva koko wongeze impendulo yakhe, emkhuthaza umntu ongonwabanga ukuba aqhakamshelane naye ngokuthe ngqo, evuma ukuba inombolo yomnxeba kwishicilelo lokuqala lalingalunganga.
Ekugqibeleni, esi yayisisifundo esikhulu kwimeko yokuba iinkampani kufuneka zisebenzise imithombo yeendaba zentlalo ukulawula uphawu lwazo kwi-Intanethi kunye nodumo Awunakho ukuthintela okanye ukulawula amagqabantshintshi. Ziya kubakho. Kodwa ukuba unomkhosi wabalandeli abathembekileyo, baya kukhusela, kwaye bakuncede ulawule imeko. Ukongeza, endaweni yokuzifihla esantini, ngokufezekisa ukufikelela kubathengi abangonwabanga okanye abagxeki kwiforum yoluntu, kuya komeleza igama lakho ngokubanzi.
tags: amagqabantshintshiukumodareyitha izimvoIndy Bizlawula izimvoIzimvo ezingakhiyoUmngcipheko vs UmvuzoImidiya yokuncokola
Ubunkokeli kwezentlalo: Umbutho woBunkokeli base-Indiana
Agasti 28, 2009 ngo-4: 53 PM
Ndikubonile oku njengoko bekusenzeka izolo kwaye kwaqinisekisa nje inkolelo yam yokuba ukuba ungakhulisa kwaye ukhulise uluntu oluthembekileyo, ulwazi olungelulo kunye nokunyathela kukhutshwa ngokukhawuleza ngamalungu alo. Kwangelo xesha izimvo ezibi azisoloko ziyinto embi njengoko zisinika ithuba lokumamela kunye nokulungisa nantoni na eyonakeleyo.
Agasti 28, 2009 ngo-5: 22 PM
Ndisoloko ndikholelwa ukuba kuya kuba njalo, kwakumnandi ukubona imidiya yoluntu isebenza!